भाद्र ११, २०७४-शनीबार दिउँसो १ बजे बबरमहलस्थित राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), नेपालको कार्यालयमा कान्तिपुर टिम पुग्दा पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट फर्किसकेका थिएनन् । प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न आयोगको कार्यालयमा पुगेका ठाकुर आधा घण्टा ढिलो आइपुगे । कार्यालय आइपुगेको आधा घण्टा पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुसँग चुनावी तयारीमा व्यस्त देखिए । समयको चाप र उम्मेदवारका लागि कार्यकर्ताबीच उत्पन्न विवादले ठाकुर तनावमा देखिन्थे । त्यसपछि कान्तिपुरसँग भएको कुराकानीमा भने उनले कुनै हतारो र तनाव देखाएनन् । आफूलाई चित्त नबुझेको प्रश्न हाँसेरै टार्ने स्वभावका ठाकुर कतिपय कुरामा भने ‘अफ दि रेकर्ड’ भन्दै खुलस्त पनि भए । संविधान संशोधन असफल भए पनि चुनावमा सहभागी हुने निर्णय लिएको राजपा चुनावी तयारीको चटारोमा छ । चुनावको तयारी, भावी कार्यदिशा, पार्टीका चुनौतीलगायत विषयमा ठाकुरसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
हो, संविधान असफल हुनुलाई एउटा सेट ब्याकका रूपमा लिन सकिन्छ । जहाँसम्म मुद्दाको प्रश्न छ, यो त सरकारले नै फेरि संशोधन गर्छौं भनेर बोलिरहेको छ । अहिले यही संसद्मा नभए पनि भोलि संसद्को रूप बदलिन्छ । त्यो बेला संशोधन गरेरै छाड्छौं त सरकारले भनिरहेको छ । अहिलेको समस्या भनेको एउटा मधेसीको मात्रै होइन । भाषा र संस्कृतिको समस्या पहाड, तराई, आदिवासी जनजाति सबैको छ । लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि राज्यको जुन चरित्र देखिएको छ, त्यो चरित्रको बदलाव आएको छैन । अहिले पनि पुरानै चरित्रको प्रारूप मात्रै देखिएको छ । देशको नागरिक होइन, आफ्नो मानिस भन्ने भावना राज्यभित्र छ । प्रशासनको चरित्रमा त्यस्तै छ ।
सरकारले गर्ने काम पूरा गरेको छ । मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, अगंभंग भएकाहरूलाई भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनका क्रममा हाम्रा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्थानीय तहको संख्या बढेको अवस्था छ । यी विषय आन्दोलनपछि सिर्जना भएका माग हुन् । आन्दोलनसँग जोडिएको मुख्य माग भनेको संविधान संशोधनको विषय नै हो । अर्को कुरा, पार्टी प्रणालीमा चुनाव एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । हामी सबै बाटो उपयोग गर्छौं त भन्दै आएका छौं । चुनाव पनि संघर्षको एउटा बाटो नै हो । संसद्मा बोलेर आवाज उठाउँछांै । कहिलेकाहीँ सभामुखको अघि बेलमा उठेर आवाज उठाउँछांै । हाम्रो संघर्ष वैधानिक बाटोमा छ । यो बाटो हामी छाड्दैनौं । हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि यथास्थितिमा चुनावमा नजाने निर्णय लिएको थियो तर, यथास्थितिबाट केही उपलब्धि हासिल भयो ।
चुनावमा भाग लिने गरी राजपाको ‘मुड’ बदलिदिने तत्त्व के हो ?
त्यसो भए राजपा चुनावका लागि सबै पक्षबाट तयार भएको हो ?
अर्को संसद्मा दुई तिहाइ पुर्‍याउने गरी तालमेलको कुरा आयो भने ?
(लामो हाँसो) हेर्नुस्, धेरै भ्रमको सिकार सत्तापक्ष वा राज्यपक्ष हुने गरेका छन् । कसैलाई लाग्छ, टुटेर जाँदै छ । कसैलाई लाग्छ, सबै कुरा बाहिरी शक्तिबाटै भइरहेका छन् । त्यो सब भ्रम हो । हाम्रो एजेन्डा समावेशीको हो, पहिचानको हो । जाति, क्षेत्र, भाषा र पहिचानलगायत आधारमा इतिहासदेखि नै विभेद हुँदै आएको छ । त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने नै हो । पहिचानका आधारमा भइरहेको विभेद कम होस् भनेरै संघीयताको माग गरेका हौं । संघीयतामा स्थानीयले अवसर पाउँछ । समावेशी हुन्छ भन्ने हो । हामीले बहिष्करणमा परेकालाई समावेश गर भनिरहेका छौं । लोकतन्त्रका लागि हामीले पनि संघर्ष गरेका हौं । सबैले ज्यान गुमाएका छन् । यतिबेला सबैले हिस्सा खोजेका छन् । एकछिन कसैलाई भ्रम रहन सक्छ । तर, ती मुद्दा रोकिनेवाला छैन । यस्ता मुद्दा पुस्तौंपुस्तासम्म जीवित रहन्छन् । नेपालका विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिन्छन् । उपचारका लागि बाहिर जान्छन् । अब हेर्नुस्, यहाँका मानिसको हकहित र सम्मानको रक्षा आफ्नो सीमाभित्र भएन भने के गर्छ ? फरक बाटो खोज्न सक्छ । त्यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नश्लवादको विरोध गर्दै आएको छ । तर, खोइ आफ्नै देशमा के छ त ? शासन प्रशासनको रूप कस्तो छ । यस्तो भन्दा ‘पोलिटिकल बम’ फोडेको भन्छन् । म भन्छु– समस्याहरू हटाइदिनुस्, बम आफैं डिस्पोज हुन्छ । समस्या रहिरहे जुनबेला पनि फुट्न सक्छ । हाम्रो चरित्र हरणका लागि बदनाम गर्न विभिन्न प्रोपोगान्डा गरिन्छ । सत्तापक्षले समस्यालाई बुझ्दैन, टाल्ने कोसिस मात्रै गर्छ ।
उहाँहरूको असन्तुष्टि बस्ने ठाउँ नपाएको मात्रै त होइन होला नि ?